Ny Nepal (amin'ny fiteny nepaley : नेपाल) na Repoblika Demokratika Federalin'i Nepal, dia firenena himalaianina, voaaty, voafaritry ny Sina (faritany mizaka-tenan'i Tibeta) any avaratra, ny India any andrefana, any atsimo sy any atsinanana.
Na dia kely aza, betsaka ny endriky ny faritra any nepal, avy amin'ny toe-tany tropikaly any atsimo hatramin'ny tendrombohitra avo indrindra eto an-tany any avaratra. Any Nepal ny valo amin'ny tendrombohitra folo avo indrindra eto an-tany. Misy ny tendrombohitra Everest (Sagarmatha amin'ny fiteny nepaley) mamaritra ny sisin-tany zarain'ny Nepaly amin'ny Sina.
Ny renivohitr'i Nepal dia Katmandu (ara-politika sy ara-pinoana) ary izy no tanàna ngeza indrindra any Nepal. Ny tanàna hafa manam-pianjadiana dia Pokhara, Biratnagar, Lalitpur (Patan), Bhaktapur, Birendranagar, Hetauda, Butwal, Bharatpur, Siddhartanagar (Bhairahawa), Birganj, Janakpur, Nepalganj, Hetauda, Dharan, Dhangadhi, ary Mahendranagar.
Ny teny ofisialin'i Nepal dia fiteny nepaley ary ny sandam-bola dia ropia nepaley. Misy foko sy kasitra 60 any Nepal. Ny kasitra ny Chhetri (Kshatriya) dia vondrona maro an'isa any Nepal (15,8%-n'ny isam-ponina). Ny kasitra ny Bahun (Brahmana) dia vondrona faharoa any Nepal (13,3%-n'ny isam-ponina araka ny census-n'ny 2001). Ny newar, foko voalohany indrindra nipetraka tao Nepal dia 5,4%-n'ny isam-ponina ao Nepal. Ny fitenin'izareo : ny fiteny newari dia mbola tenenina ao amin'ny lohasahan'i Katmandu. Ny foko hafa mbola misy ao Nepal dia ny herpa, ny Tamang, ny Gurung, ny Thakali, ny Kiranti ary ny Magar.